Fence eye wash chiteshi
65L ANOGONESESA GRAVITY FED EY ...
mubatanidzwa shawa uye ziso / ...
mubatanidzwa shawa uye ziso / kumeso kugeza
65L ZVINOGONESESA GIRAVHA FED EYEWASH
Iro zita rezvigadzirwa BH34-2031LHC Inotakurika ziso washer maratidziro epurasitiki, ABS, Tsanangudzo yechigadzirwa Chiso (ziso) kuyerera: ≥ 1.5 L / min, inogona kushandiswa inoenderera kweinopfuura maminetsi gumi neshanu, Iyo yekuchengetedza mvura ziso washer ine chinodikanwa chekuenderera kushandiswa. nguva, uye mushandisi anofanira kuve nechokwadi chekuchengetedza mvura Iyo yekuchengetera mvura bhokisi reziso washer rakagadzirwa yero polyethylene 3. Kunonyanyisa kuchengetedza mvura: 14 gal (53 L), 15 min; Kugadzirisa nzira: madziro akatasva, 304 simbi isina chinhu b ...
Tsananguro yehunyanzvi. 2.Iye yekuwachisa uye yekugezera zvakateedzana zvakapoteredzwa nefenzi mbiri. Vashandisi vanopinda mufenzi kuti vageze maziso avo kana shawa vanogona kubata fenzi nemaoko, izvo zvine njodzi; chiteshi che eyewash chakakamurwa kuita nzvimbo dzekugezesa uye dzekugezesa, uye vashandisi vanogona kushandisa nzvimbo dzakasiyana zvinoenderana nemamiriro ezvinhu ； 3. Kana mushandisi akamira muyewash fence ar ...
chigadziko chegomo ziso / kumeso kushambidza
304 simbi isina chinhu kunze, yakasaswa neyakajeka yero ABS yekumhanyisa, hukobvu hwemamirioni mazana matatu, kupenya kwakanaka kwemadziro emukati epombi, kuwedzera kusagadzikana kweyewashi mune yakanyanya kupisa nzvimbo, inoita basa rekusimbisa ngura kuramba.
ZISO / CHISO CHINOSHAMBIDZWA BHUKU
304 simbi isina waya ndiro inoitwa nekukotama, iyo ukobvu iri 1.2mm. Kuenderera mberi kwekushandisa kwemaminetsi gumi neshanu pasina spillover.
Saizi yekunze 1000 * 900 * 2400mm (kureba * upamhi * kureba).
Iyo ine kumira kwakanaka kumafuta, acid, alkali uye munyu mhinduro.
Inogona kushandiswa neyakagadzika uye yakasanganiswa eyewash mudziyo.
Kudya kwepamusoro, 5/4 tambo yekubatanidza MNPT, nzira 150mm pamusoro pevhu, 3/2 tambo yekubatanidza FNPT kana kubatanidza flange.
madziro akaiswa ziso / kumeso kugeza
Yekutanga modhi: BH33-1010 (304)
maitiro akanaka kwazvo:chaiyo 304 simbi isina chinhu, ine anopfuura masere nickel. Standard configuration, anogona kudzivirira asidhi, alkali, munyu uye zvimwe kungatikanganisa zvinhu. Mari. Iwo madziro akaisirwa panzvimbo yebasa haatore nzvimbo.
zvinhu: muviri mukuru 304 simbi isina chinhu 3, mudziyo wekugezesa: kwete.
KUGADZIRA-KUDZIVIRIRA SHOWER NEZISO / CHISO CHESHURE
Gungano reziso rinotora zvikamu zvitatu zve304 simbi isina simbi + ABS yero epoxy resin, iyo isina musono simbi chubhu muforoma ichikanda kuumbwa kwakasanganiswa, kumeso kwepamusoro, yakasimba kumanikidza kuramba, hupenyu hwakareba hwebasa, ziso pamusika chikamu chakakosha pane gumi gungano rekuwisira gungano, weld, pamusoro coarse, kushanda pasi pekumanikidzwa hakusi kumanikidza, kuri nyore kutsemura pombi kuvuza, hupenyu hupfupi hwebasa.
Kuvigwa kaviri tsvimbo ziso washer
Inlet yemvura uye inodururwa mudziyo weakavigwa eyewash yakaiswa pazasi pemafafrost. Vhura vharuvhu, uye pombi yemvura inoyerera ichipinda muziso rewashing kubva pasi pevhu yemvura. Vhara vharuvhu, uye iyo sisitimu inogona otomatiki kudurura mvura iri mune yeziso pombi. Inoshanda kuchando pazasi pemadhigirii enharaunda, kudzika kwepermafrost kwakakura kudarika 500MM yekushandisa, kutamba chaizvo anti-kutonhora mhedzisiro. Zvigadzirwa zvepamutemo, kunyepedzera zvichatongwa; Patent nhamba: ZL 2012 2 0337278.7
Magetsi kupisa geza chishandiso chakakodzera kuchamhembe 0 madigiri pazasi pekushandisa kwenzvimbo. Inokodzerawo kushandiswa munzvimbo dzine tembiricha yakakwira kupfuura -45 ℃. Simba remagetsi ekutsvaga bhandi ndeye 6 M * 48W / M. Otomatiki thermostatic kutonga kwenzvimbo yeumwe. Iko kune yekushisa tembiricha kudzora iyo yekudziya simba yeanodziya bhandi kuona iyo mvura tembiricha. Kuputika-chiratidzo cheyero: ExdIICT4, IP65 dziviriro. Magetsi magetsi junction bhokisi remagetsi ekutsvaga bhandi rakarongedzwa zvakasiyana kubva kune tembiricha yekudzora junction bhokisi. Ukobvu hwenzvimbo yekudziya yekushisa ndeye 30MM, uye iyo yekuisa zvinhu murazvo unodzora rabha. Voltage: AC220V / 1PH / 50Hz.
Magetsi kudziyisa ziso yekuwacha mudziyo kunoenderana nemagetsi kupisa kutsvaga maziso ekugeza mudziyo, yakakodzera kuti ishandiswe munzvimbo dzine tembiricha pazasi pe 0 madhigirii, inogona kunyatso kugadzirisa iyo tembiricha yemvura yekushambidza maziso nemadhigirii gumi nemashanu.
Iyo yeziso yega ine basa rekutsvaga kupisa, kuputira uye antifreeze, kuitira kuti tembiricha yemvura yeiyo eyewash system ichengetwe pane tembiricha yenguva dzose. Kuchenesa mudziyo: inotumirwa nguva dzose tembiricha yemagetsi yekutsvaga bhandi inogamuchirwa uye yakagadzirirwa otomatiki tembiricha yekudzora system kudzora kudziya tembiricha. Insulation rukoko: nharaunda-inoshamwaridzika yerabha zvinhu. Kavha: yambiro yero ABS zvinhu, inoshingirira kukora nemakemikari akasiyana.
Zvakanakira maficha: iyo inlet yemvura uye yekudonha mudziyo weyakavigwa ziso washer yakaiswa pazasi pemafafrost. Vhura vharuvhu uye pombi yemvura inoyerera ichipinda mune yeziso washer system kubva pasi pevhu yemvura inlet. Kana iyo vharuvhu ikavharwa, iyo sisitimu inogona otomatiki kudurura mvura mune yeziso pesheni pombi. Inoshanda kuchando pazasi pemadhigirii enharaunda, kudzika kwepermafrost kwakakura kudarika 500MM yekushandisa, kutamba chaizvo anti-kutonhora mhedzisiro.